Jurgen Klopp oo ka hadlay fursadaha Naby Keïta iyo Fabinho ee kooxda Liverpool – Gool FM
Jurgen Klopp oo ka hadlay fursadaha Naby Keïta iyo Fabinho ee kooxda Liverpool
Dajiye December 2, 2018
(Liverpool) 02 DEC 2018. Jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa waxay bilaaween inay wax iska weydiiyaan xaalada mustaqbal ee labada ciyaaryahan Naby Keïta iyo Fabinho, kadib markii laga saaray shaxda tooska ah ee Reds xiliyadii lasoo dhaafay.
Liverpool ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u xun kulankii UEFA Champions League ay Arbacadii lasoo dhaafay kula ciyaareen kooxda Paris St Germain.
Hadaba jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa kaga careysan tababare Jürgen Klopp shaxdii uu u soo xushay kulankii Paris St Germain, taasoo sababtay in ay la kulmaan guuldaro xitaa hoos u dhigtay rajada ay ka qabi karaan u soo bixitaankooda wareega xiga 16-ka UEFA Champions League.
Si kastaba macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka hadlay fursadaha ay heli karaan labada xidig Naby Keïta iyo Fabinho kulamada soo aadan.
“Dabcan labadan ciyaaryahan waxay qeyb ka yihiin qorshaha kooxda, Naby Keïta wuxuu u ciyaaray si wanaagsan bilawga xili ciyaareedkan, laakiin dhaawac ayaa soo gaaray”.
“Qof kasta wuxuu heystaa fursad, waxaan u baahanahay dhamaan ciyaartoyda ku sugan kooxda xiliyada soo aadan, waxaa na sugaya waqti dheer ee mashquul badan, qof walbana wuxuu yeelan doonaa door”.
AC Milan oo Guul Dirqi ah ka Gaartay Parma
Chelsea oo Guul ay u baahneed ka gaartay Fulham+SAWIRRO